लैंगिक हिंसा न्युनिकरणका लागि के भन्छन् त सामाजिक अगुवा ? |
लैंगिक हिंसा न्युनिकरणका लागि के भन्छन् त सामाजिक अगुवा ?
प्रकाशित मिति :2016-11-24 17:02:42
पीडा लुकाउनु हुँदैन
इन्दिरा भट्टराईः नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य
महिलामाथि धैरै नै हिंसा हुने गरेको छ । पीडित महिलाहरूले आफै पिडा लुकाएका कारण पनि हिंसा भएको पाइन्छ । आफू हिंसामा परेको कुरा महिलाले दबाएर राख्नु हुँदैन । अन्याय सहनु भनेको पनि हिंसा हो । यसलाई महिलाले मनन गर्नु आवश्यक छ । अर्को तर्फ जुन रुपमा महिलाको योगदान छ , त्यो योगदानलाई पुरुष प्रधान समाजले सजिलै कदर गर्न सक्दैन । यो परिपाटीको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ जसले गर्दा लैंगिक हिंसा कम हुन जान्छ ।
पुरानो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ
विमला घिमिरेः नेकपा एमाले केन्द्रीय स्कुल विभाग सदस्य
सामाजिक परम्परा , धार्मिक मुल्यमान्यताका कारण महिला हिंसामा पर्ने गरेका छन् । कतिपय महिलालाई खास गरी मानवअधिकारका वारेमा समेत जानकारी छैन । समाजमा हुने कुँसस्कारलाई हटाउन गाउँ गाउँमा सचेतना फैलाउन आवश्यक छ । अधिकार र कानुनका वारेमा जानकारी गराउनु पर्छ जसले गर्दा लैंगिक हिंसा कम हुन सक्छ । अर्को तर्फ अहिलेसम्म महिलालाई मात्र राखेर कार्यक्रम गरिएको छ । कार्यक्रम गर्दा श्रीमान श्रीमती अर्थात् महिला पुरुषलाईसंगै राखेर कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । कुनै न कुनै राजनैतिक दलमा पनि महिलाह आवद्ध हुन आवश्यक छ । जसले गर्दा लैंगिक हिंसामा परेका महिला न्यायका लागि पहुँचमा सहज वातावरण हुने छ ।
राज्यले वलियो नेटवर्क बनाउनुपर्छ
सन्तोषी पाण्डे: केन्द्रीय सदस्य नेकपा माओवादी –केन्द्र
हिंसा र कानुनका कुरा गर्दा महिला र पुरुषलाई संगै राखेर कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । तवमात्र दुवैले धैरै कुराको जानकारी पाउँछन् । लैगिक हिंसा न्युनिकरण गर्नमा यस कार्यले ठुलो सघाउ पुर्‍याउँछ । जवसम्म हिंसाका वारेमा महिला र पुरुष दुवै जनालाई थाहा हुन सक्दैन त्यहानेर हिंसा भई नै रहन्छ । अर्को कुरा कार्यक्रमहरू पनि रुपान्तरण भई परिणाममुखी हुनुपर्‍यो । महिला हिंसा न्युनिकरणका लागि राज्यले वलियो नेटवर्क बनाउनुपर्छ । ताकी त्यो नेटवर्कले हिंसामा परेकाको तुरुन्त उद्धार गर्न सकोस् र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकोस् ।
महिला संगठित हुनुपर्छ ।
चन्द्रवदम श्रेष्ठ :अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य
जुनसुकै तहका महिला पनि संगठित हुनु आवश्यक छ । विचारमा फरक भए पनि सवालमा एक भएर काम गर्दा महिलाको उद्धार हुन्छ । जुन सुकै काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । गाउँ गाउँमा महिला हिंसामा परेका हुन्छन् । उनीहरूलाई कहाँ गएर न्याय पाइन्छ भन्ने समेत थाहा हुँदैन् । त्यसैले कार्यक्रम गर्दा चार तारे होटलमा मात्र गर्ने होइन । गाउँमा गएर वास्तविक पीडितका भनाई सुन्नुपर्छ र उनीहरुलाई न्याय दिलाउन सहयोग पुर्याउनु पर्छ । महिला आफै पनि सुरक्षाका लागि सचेत हुनु पर्छ । प्रहरी प्रशासनको सम्पर्क राखी अप्ठ्यारो परेको परिस्थितीमा फोन गर्नुपर्छ ।
गरीवी र अशिक्षालाई हटाउनुपर्छ
दोलक ब. प्रछाई
दोलख वहादुर पछाई : अध्यक्ष नागरिक समाज अध्यक्ष कपिलवस्तु
गरीबी र अशिक्षाका कारण पनि लैंगिक हिंसा बढ्दो छ । यसलाई रोक्न राज्यले शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । जुन महिला रोजगारीमा छन् , आर्थिक रुपले सवल छन् भने ति महिला हिंसामा परेको देखिँदैन । जुन महिला आर्थिक रुपले विपन्न छन् , शिक्षामा पछाडि छन् त्यहानेर चरम हिंसा हुने गरेको हामी पाउछौं । महिलालाई शिक्षित बनाउने कुरा र आयआर्जन एवं रोजगारीमा लगाउने काममा राज्यले विशेष लगानी गर्नुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र महिलामाथि हुने हिंसा कम हुन्छ । अर्को तर्फ निम्नस्तरको वर्ग हिंसामा परेको छ भने त्यो वर्गका समुदायलाई राज्यले पनि सुनुवाई गरेको पाईंदैन । पहुँचवालाले मात्र न्याय पाएको देख्न सकिन्छ । यस्तो हुनु हुँदैन ।